Interview – osnepal tv
ट्रम्प देखी मोदी सम्म को कुण्डली भएका ज्योतिष नेपालमै, ज्ञानेन्द्रको नाती राजा हुने पक्का (भिडियो )
अन्जु पन्त र मेलिना राईलाई बिर्साउने गरिमाको स्वर ! स्वर सुन्दा झुक्किनुहोला (भिडियो)
अघोरी बाबालाई यसरी सम्झिए सत्य सनातन बाबाले, खोले ध्यान, योग र तपस्याबारे भित्रि कुरा (भिडियो सहित)
पूर्व मन्त्रीका छोरा साधू बनेर पशुपतिमा पानी बीच किन गर्दैछन् तपस्या ? किन छाडे राज खानदान ? (भिडियो सहित)
मास्टर्स सकेपछि थोत्रो टायरमा भविष्य खोज्दै ओजस्वी, बन्छ यत्ति आकर्षक समाग्रीहरु (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय विशेष गरी युवा पुस्ताको विदेश मोह अत्याधिक छ । हुन त कत्तिको बाध्यता होला कत्तिको रहर तैपनि स्वदेशमै केही गरौं भने पनि केही नदेख्नेहरुको अर्को लर्को छ । त्यसो त स्वदेशमै केही नयाँ गर्ने हो भने बजार लिन सकिन्छ अर्थात् कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदारण हो काठमाण्डौंकी ओजस्वी बैध्य र उनको टिम […] More
by osnepaltvs July 9, 2019, 8:11 pm
मलेसिया पुगेपछि उहाँले हामीलाई भूल्नु भो, धेरै दुःख पाएँ अनि आमाको उपचारको लागि रङ लगाउने काम थाले (भिडियो सहित)
यत्तिखेर नेपाल छोडेर रोजगारीको लागि परदेश जाने युवाहरुको लामो लर्को छ । आफन्तसँग छुटेर बस्नु पर्दा सबैलाई पिडा पनि हुन्छ नै । त्यसो त खोटाङकी पर्वती श्रेष्ठको पनि सानै उमेरमा विवाह भयो अनि श्रीमान् लागे मलेसिया तर अरुको जस्तो पतिले साथ दिएन बरु सम्पर्क विहिन भयो । पति सम्पर्कमा नआएर उतै हराएपछि पर्वतीलाई पर्नु सम्मको […] More
by osnepaltvs July 8, 2019, 6:04 pm
हामी जिन्दगीमा केही गर्न सकिएन भनेर निरास हुन्छौ । हामी साना कुरामा ध्यान नै दिदैनौ तर तिनै साना सना कुरामा पनि जीवन दर्शन र जीबिकोपर्जन गर्ने आधार हामीले नदेख्दा हामी भौतारिरहेको हुन्छौ । तर एक बुढी आमाले ६१ बर्षको उमेरमा पनि मकै बेचेर एक घर जोडेकी छिन् । उनको नामा हो अम्बिका न्यौपाने । उनि […] More
by osnepaltvs July 8, 2019, 7:00 am
भेटिए यात्रुको सोच बदल्ने गंगारामको अनौठो बस, सभ्य बन्न पाउँदा खुसी भए यात्रु (भिडियो सहित)
शहरमा धेरै बसहरु गुड्छन् तर भक्तपुरका गंगाराम खाईजुको तरिका भने अरुको भन्दा फरक छ । बसभित्र पिउने पानी देखि चाऊ चाऊ समेत किन्न पाइन्छ । त्यसैगरी मास्क अनि बडी स्प्रे पनि राखिएका छन् , छेऊैमा झुण्ड्याएको छ फोहोर फाल्ने भाडा पनि । गंगारामको बसमा चढ्ने वित्तिकै आश्चर्य लाग्ने कुराहरु भनेका भित्ताभरि टाँसेको यी विभिन्न भनाईहरु, […] More
by osnepaltvs July 6, 2019, 3:38 pm
८० बर्षमा पनि सडकमा ठेला : मिठो छ हाँसो अनि पराठ्ठाको स्वाद तर छैन सन्तानको साथ (भिडियो सहित)
उमेरले ८० बर्षको यात्रा गरिरहेको छ तर बालुवाटारको एउटा सडकको पिपलबोट मूनि ठूलीमाया आमा पराठ्ठा पकाउन व्यस्त देखिन्छन् । उनीभित्र जीन्दगी जिउने बेग्लै कला छ, त्यही भएर खुसी पनि छिन् । छोरा छोरी छन् तर साथ पाएका छैनन् बरु एक जना छोरा समानको ठिटो आमालाई सहयोग गर्छन् । त्यसो त ठूलीमाया आमा उमेर ढल्केका आमाहरुको […] More
by osnepaltvs July 5, 2019, 5:28 am
नेपालमै भेटियो १ किलोको डेढ लाख पर्ने जडीबुटी, यसरी गरिन्छ खेती (भिडियो सहित)
नेपाल बहुमूल्य जडिबुटीहरुका लागि निकै उर्वर भूमि हो । यहाँ विभिन्न रोगहरुका लागि औषधी बनाउन प्रयोग गरिने जडिबुटीहरु पाइन्छ । त्यसो त समयमै जटिबुडी चिन्न सके र आफ्ना खाली खेतबारीमा उमार्न सके लाखौं आम्दनी पनि गर्न सकिन्छ । हामी यहाँ प्रस्तुत गरेको जटिबुडी चाँहि सतुवा हो, जुन किलाकै करिब एक देखि २ लाख सम्म विक्री […] More
by osnepaltvs July 4, 2019, 8:49 am
भक्तपुर काण्डले लियो नयाँ मोड , प्रत्यक्षदर्शिको भनाई यस्तो छ ! (भिडियो )
आमा भन्दा ठूलो संसारका अरु कोही पनि हुँदैनन् भन्ने गरिन्छ । तर, भक्तपुर चाँगुनारायणकी ६१ वर्षीया सावित्री भट्टराई यस्ती अभागी आमा बनिन् जो आफ्नै छोरीको हातबाट हत्याको शिकार बनिन् । जुन घटनाले अहिले सारा दुनियाँलाई चकित मात्र बनाएको छैन । चिन्तित समेत बनाएको छ । साबित्रिकी छोरी ईश्वरीले आफ्नै आमालाई हत्या गर्ने यत्रो योजना बुनेकी […] More
by osnepaltvs July 4, 2019, 8:23 am
हास्यकलाकार जितु नेपाल आफ्नो वास्तविक नामले भन्दापनी मुन्द्रे नामले अरिचित छन् । शायद त्यसैको प्रतिफल होला उनले संचालन गरेको कार्यक्रमको नामपनी “मुन्द्रेको कमेडी शो” राखेका छन् । उक्त शो अहिले चर्चामा छ । उक्त शो चर्चामा हुनुको कैयौ कारण छन् । जसमध्य त्यसमा भएका क्यारेक्टर एक प्रमुख कारण हो । धेरै दर्शकलाई हसाउन सिआलु जितु […] More
by osnepaltvs July 3, 2019, 3:08 am
in Education, Interview, Video
कस्तो अचम्म! हजुर आमा र नाती एकै पटक एसईई पास, हजुरआमा भन्छिन् अव फेसबुक खोल्छु (भिडियो)
७० बर्षे आमा योगमाया कार्किले यसपालिको एसईईमा सहभागि भई उतिर्ण भएकी छिन् । उनको उमेरमा देखिएको जोस जांगर र साहसको कदर गर्नै पर्छ । उनले सुरुबाटै अर्थात कक्षा एक बाटइ आफ्नो अध्यनलाई यो उमेरमा आएर सुरुवात गरेकी थिईन । उनी भन्छिन गर्छु भनेको काम गर्न उमेरले कसैलाई छेक्दैन । उनी एसईई सकिएतापनी आफ्नो पढाई यही […] More
by osnepaltvs June 29, 2019, 4:06 am
प्रकाश सपुतको भाईले खोले गल्बन्दी बिवादको खुलासा,कामी भन्नेलाई कार्वाही गर्नेछु: देबेन्द्र
पछिल्लो समय प्रकाश सपुत र शम्भु राई बिछ गलबन्दीलाई लिएर भएको बिवाद समाप्त भएको छ । तर पनि त्यस बिचमा उठेका जातिय कुराले भने धेरैको मनमा डेरा जमाई रहेको छ । यसै अबस्थामा यसको बिबादको अन्त्य भए संगै प्रकाश सपुतको भाई पहिलोपटक मिडियामा आएका छन् । प्रकाश सपूतले बिना गल्तिनै उक्त समय भएको सहमति लाइ […] More
by osnepaltvs June 28, 2019, 2:37 pm
एसईई पास भएपछी करिष्मा भन्छिन् अव अर्को महिनाबाट राजनीतिमा सत्रिय हुँदै देश हाक्छु एकदिन(भिडियो)
सदाबाहार नायिका करिष्मा मानन्धरले यो बर्षको एसइइ परिक्षामा सहभागी भाई बी प्लस ल्याएकी छिन् । उनले एसइइमा ३ ल्याएको वुझिएको छ । ८ कक्षापछि चलचित्र क्षेत्रलाई निरन्तरता दिएपछि पढाई अधुरो नै रहेपछी उनले काठमाण्डौको मैतिदेवी रहेको त्रिवेणी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेकी थिइन् । आज आफु परिक्षामा पास भएपछी उनि आफु पढेको […] More
by osnepaltvs June 28, 2019, 2:28 pm
करिष्मा भन्छिन् एसईईमा छोरीको भन्दा धेरै नम्बर ल्याए, अनी शान्ताको चै ? हेर्नुस् भिडियो
नायिका करिष्मा मानन्धर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा उतिर्ण भएकी छिन् । उनले बी प्लस ग्रेड ल्याई उत्तीर्ण भएकी हुन् । काठमाडौंको मैतीदेवीस्थित त्रिवेणी पब्लिक स्कुलमा अध्ययन गरेकी करिष्माले डिल्लीबजारमा रहेको विजय स्मारक मावि परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिएकी थिइन् । यसैगरी प्रतिनिधि सभाकी सांसद शान्ता चौधरीले भने “बी” ग्रेड ल्याई (एसईई) उतिर्ण गरेकी छिन् । […] More
by osnepaltvs June 27, 2019, 4:32 pm